Kufsiyadii Argaggaxa lahaa ee Gilgilay Qalbiyada Dadka Soomaaliyeed! | Aftahan News
Kufsiyadii Argaggaxa lahaa ee Gilgilay Qalbiyada Dadka Soomaaliyeed!
Somalia (aftahannews):- Muddooyinkii u danbeeyey deegaammada Soomaalida meelo badan ayaa laga soo sheegayey dhacdooyin kufsi ah oo ka dhacay.
“Gabdhuhu waxay ka mid yihiin bini’aadmka Alle karaameeyay, marka dhibaato loo geystana waxay u baahan yihiin iney caddaalad helaan. Sharcibaa Alle ka sameeyay oo diinteena lagu soo dejiyay dhanka kalana waxaa jiraya shuruuuc madani ah oo ay dadku sameysteen, marka sidaa darteed oday dhaqameed meel ugama banaana,” ayay tiri Aamina.
“In odayaasha ay xalliyaan arrimahani waxay ahayd xad gudub lagu sameeyn jiray dadkii joogay xilliyadii dowladda ka hor oo waxaa la dhihi jiray ninka gabadha kufsaday ha guursado amaba waxaa laga qaadi jiray xoolo si maslaxad loo gaaro, waxaana dhihi karaa waa fal jaahil-nimo ah.”
“Waxaad arkaysaa, qofkii dhibaatada loo geystay oo weli isbitaalka ku jira, odayaashana go’aan iska gaarayaan marka sidee qof maqan go’aan looga gaari karaa? Waa arrimaha la yaabka leh ee ay oday dhaqamadyeedyada sameeyaan” Marka in wiilasha la difaaco, hadana berri fal noocaas ah ay geysastaan waa dibaato weliba sun ah.”
“Oday, aabe, walaal, intaba ma aaminsani, mana ii muuqato iney door ku leeyihiin gabadh la kufsaday”
Waxay sheegtay in markaasi kaddib ay go’aansatay si ay waxbarashada gabdheeda uga istaagin iney iskuul ka geyso magaalada Wajeer, waxayna guddoomiye ku xigeenka tuuladooda ay ka codstay inuu gabadha iskuul u geeyo.
”Markii aan gabdha u dhiibay guddomiyaha tuulada, aniga waan isaga haray ee isaga kaligii ayaa soo kexeeyay kaddibna gabadhii ayaa waxa uu ku yiri inamari guri halkan ah ayaan buugaag kaaga soo qaadaya, markii ay guriga galeen ayuu hoose ka soo xirtay biya ayuuna siiyay”, ayay tiri hooyo Isniino.
Horaantii bishii Abriil ee sannadkan waxaa si weyn usoo shaac baxay war argagax leh oo ku saabsan kufsi labo gabdhood oo aad u da’ yar loogu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose.
Labada gabdhood oo lagu soo warramay inay qaraabo dhow yihiin ayey da’dooda kala tahay 3 jir iyo 4 jir.
3: Kufsigii Caa’isha ee Gaalkacyo
XIGASHADA SAWIRKA,RADIO BANAADIR
Magaalada Guriceel ayaa bilowgii sannadkii hore waxaa ka dhacay kufsi ay afar nin oo dhalinyaro ah u geysteen gabar day’yar, kuwaasi oo markii dambe maxkamadda degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ee Maamulka Galmudug ay xukun xabsi oo minlix bilood ah ku riday.